Faa'iidooyinka Shiinaha ee soosaarayaasha dhoobada dhoobada ah iyo alaab-qeybiyeyaasha. JIAXING
1. Fududeeyaha cimilada adag ee faleemka xarkaha guud ahaan wuxuu soosaaraa resins injineernimada iska caabinta heer sare ah sida ASA, PPMA, pmma, iwm. Waxay ilaalin kartaa xasilloonida midabka iyo sifooyinka jirka xitaa ka dib soo-gaadhista muddada-dheer ee shucaaca ultraviolet, qoyaanka, kuleylka, qabowga iyo saamaynta.
2. U adkaysiga daxalka
Cusbi iska caabin cimilada sare iyo cusbi ugu weyn waxay leeyihiin iska caabin ah daxalka aad u wanaagsan, Ma baabi'in doonaa roob iyo baraf si ay u keento nabaad, Waxay iska caabin kartaa daxalka ee walxaha kiimikada badan sida acid, alkali iyo milix muddo dheer. waxay aad ugu habboon tahay dhulka xeebta leh sunta buufinta leh ee milixdu ku badan tahay iyo meelaha wasakhaysan ee hawadu leedahay.
3. Waxqabadka anti-load fiican
Foornooyinka dhoobada dardaro leh waxay leeyihiin iska caabin xamuul oo wanaagsan.
4. Iska caabin saameyn wanaagsan leh iyo iska caabin heerkulka hooseeya
Foornooyinka la isku qurxiyo ee darbiyada leh waxay leeyihiin caabin wanaagsan oo saameyn ku leh heerkulka hooseeya, 1-kii dubbayaal bir culus ayaa si xor ah ugu dhacaya dusha sare ee dusha sare dhererkiisu yahay 1.5 mitir oo aan dillaacin. Ka dib 10 wareeg oo baraf-dhalaalid ah, Badeecaddu ma laha godad, xoqid, xoqid iyo dildilaac.
5. is nadiifin
Dusha sare ee dusha sare ee darbiyada macmacaanka ah ayaa cufan oo siman, ma fududa in la nuugo boodhka, wuxuuna leeyahay "saamayn lotus" .Roobka ayaa la maydhay sida cusub, mana jiri doonto wax isdaba-joog ah oo roob lagu maydho ka dib marka wasakhda la dhigo .
6. fududahay in la rakibo
Guud ahaan, badeecadani waxay leedahay astaamaha soo socda:
Aagga xaashida ah ee ballaaran, waxtarka sare ee laamiga
Miisaanka khafiifka ah, fudud ee kor loo qaado
Buuxi alaabada taageerta
Qalab iyo habab fudud
Qalabka dhoobada dardaaranka ah ayaa ka gudbay Shahaadada Shayga Deegaanka ee Shiinaha.
Marka nolosha badeecaddu dhammaato, dib ayaa loo isticmaali karaa loona isticmaali karaa.
8. Qiimeynta dabka waxay gaareysaa B1
Waxay buuxisaa shuruudaha ilaalinta dabka qaranka ee qalabka saqafka waxayna gaaraysaa heerka olol-celinta, taasoo si wax ku ool ah u daahineysa faafidda dabka.